IPharadesi Elikhulu Lolwandle
Le ndlu enhle enkulu engasebhishi etholakala ekungeneni kwePlaya Costa Del Sol. Indawo ivulekile kakhulu enezihlahla eziningi zikakhukhunathi nokufinyelela okuqondile ogwini. Indlu ifakwe ikhishi le-BASIC, izitsha, amapuleti, izinkomishi, izitsha, i-bbq, indawo yokupaka izimoto eziningi namakamelo okulala anokubukwa kolwandle. Uma uthanda ukuhamba ngesikebhe, sinesikebhe nokapteni abalungile (izindleko ziyasebenza)
CHA ALQUILAMOS LA CASA POR OTRO MEDIO SOLO AIRBNB
5 imiz. shayela usuka esitolo esikhulu, imizuzu engu-7 ukushayela usuka e-Restaurant Ola Betos, eduze nezindawo zokudlela eziningi ezihlinzeka ngisho nokudiliva. Uma ungathanda ukuhamba ngesikebhe namanzi. Zizwe ukhululekile ukungibuza, sinokuthintana nesikebhe esinokapteni.
Eduze kwezindawo eziningi zokudlela ezinhle namahhotela. Ola Betos, La Pampa Argentina, Acajutla, mariscos patty. Sinendawo yokudlela yasendaweni eduzane eletha ukudla okuhle kakhulu okunezinhlobonhlobo zokudla kwasolwandle. Sicele ukuthintana naye
Ngitholakala 24/7 futhi nginganikeza usizo, amathiphu noma iseluleko.